Indlela To Hlala Safe Ngoxa Driving Ngexesha Winter | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Indlela To Hlala Safe Ngoxa Driving Ngexesha Winter
Winter lixesha ogqibeleleyo ukwakha umlilo ngomsindo, ngokukhuselekileyo hit the kumathambeka, ukwakha snowmen kwaye snuggle ne ikomityi nice yeti. Ngelishwa, ukuba asingabo bonke fun nemidlalo. Winter kukwadala ezinye indlela eyingozi kakhulu iimeko. Ngenxa yokuba akwenzeki ukuba abaninzi bethu ukuba ubusika de spring, apha zi iingcebiso oludingayo njani ukuze uhlale ukhuselekile ngoxa uqhuba ebusika.
Driving Safe? Numbers Musa Ukuxoka
Cinga ke ukuba ngokugqithiseleyo balumke siyaniyala iingcebiso Indlela yokusinda xa uqhuba ngo Winter? Ngoku ka AAA, izaqhwithi Winter, sezulu esibi, kunye nemiqathango yendlela sloppy kukho into beemoto kwiingozi phantse kwesiqingatha sesigidi ngaphezu 2,000 ukufa indlela yonke ebusika.
Phathani Supplies likaxakeka Travel yakho Car
Ngamaxesha athile, injongo wakho ukuba uhlale ukhuselekile ngoxa uqhuba ngexesha ebusika Akwanele. Sithanda ukuhlala inamhla, 'Ithemba for the best, ukulungiselela 'embi. Qiniseka imoto yakho kuthwala nge izinto xa kuvele imeko kaxakeka. Quka ngengubo efudumeleyo, abangenazimpahla zifudumeleyo, ngezixhobo zoncedo lokuqala, layita okanye ukuvuleka, zikagesi umakad, i ice ize, umhlakulo, isanti okanye kitty ukungcolisa ukukunika ibambelele, yaye snow imixokelelwane. Kufuneka kwakhona athwale amanzi, ukudlaimivalo ithu- amandla okanye umzila mix-yaye kwitshaja phone!
Le kwincam yokuqhuba ubusika professional umgca omde abaqhubi usebenzise ukumisela ukuba iimeko mgwaqo enomkhenkce. Hlola izibuko yakho ngaphandle. Ukuba ice iyaqala ukwenza kwi izibuko, loo nto inkomba ukuba umkhenkce kwakhona ukwakha emendweni. Baqikelele ukuba uhlale ukhuselekile ngoxa uqhuba okanye ulinde de ukufudumala ukuqhuba.
Qhuba Safe kwaye Shiya Early!
Oku kungakhangeleka ngathi yinto enye ecacileyo, kodwa siyazi ukuba ndixakekile yaye uzimisele ukuya kwindawo yakho elandelayo. Silapha ukuze akukhumbuze ukuba uthathe it slow! One of our main tips on Indlela yokusinda xa uqhuba ebusika kuvumela ixesha elongeziweyo ukuba sifike oya kuyo. uhambo ithatha ixesha elide ebusika kunezinye amaxesha onyaka, ingakumbi xa udibana iimeko uqhwithela okanye imigwaqo. Kwaye ndiqhuba imozulu engentle na uxinzelelo ngokwaneleyo ngaphandle kongeze uxinzelelo yokuba efika emva kwexesha, leyo ukuze angenzi sigqibo lakho lokuqhuba ekhuselekileyo.
Qhuba Safe kwaye Nciphisa Iziphazamiso
Indlela yokusinda xa uqhuba ngo Winter #1 tip: Beka phantsi ifowuni yakho! Gcina ifowuni yakho icinyiwe okanye idityaniswe imoto wakho Bluetooth-yaye sithathe izandla zakho ivili okanye amehlo endleleni ukutshekisha ukuba umyalezo kuWhatsApp.
Hlala Safe Nangona Iindlela Driving Mamela Road!
Hayi, akaliphulaphula uYehova entliziyweni yakho. Hayi ngeli xesha kunjalo. Mamela emgaqweni. zemibhalo. Amavili yenza izandi ezahlukeneyo xa uqhuba qhwa ku, leyo esinye isizathu ukugcina umthamo wakho kunomathotholo ngenxa ukhuseleko lokuqhuba ubusika. Ngekhephu ingxolo indlela kufuneka ibe phezulu kakhulu kuba ikhephu kudubula. Ukuba umsindo ngesiquphe ime, kungenzeka ukuba bafudukela qhwa ice evela. Hlala ubukele ku sound Amavili zakho endleleni siqhubeke phezulu iimeko yendlela etshintsha rhoqo ngokukhawuleza, ingakumbi ngexesha okanye emva isaqhwithi.
Indlela Kuhlala Safe Ngoxa Driving Ngexesha Winter? Qiniseka cerebrospinal yakho wiper iqulethe anti-ngumkhenkce, ngoko isitshizi akuthethi ngumkhenkce phezulu ngeentsuku ezibandayo. Cinga ukuthenga iincakuba zasebusika wiper, ethintela ice kunye nekhephu lukhuni kwi wiper!
I balandela amacebiso akho uphinde waxinga
Ngamaxesha athile, ezi zinto nzima iphetshwe. Ukuba umntu exabileyo ikhephu apha amanye amacebiso msinya:
Hlala imoto yakho: isithuthi sakho inikezela yokuhlala okwethutyana kwaye yenza kube lula ukuba abahlanguli ukuba zithole. Musa ukuzama ukuhamba sisaqhwithi kakhulu. Kulula ukuyilibala isithuthi sakho yokukhithika kwaye ukulahlekela.
Musa overexert wena: Xa kusavunjululwa isithuthi sakho, mamela umzimba wakho uze uyeke ukuba ube udiniwe.
Yiba Ibonakala: Bopha ilaphu elinemibala eqaqambileyo kwi-eriyali yesithuthi sakho okanye ubeke ilaphu phezulu kwifestile esongwayo ukubonisa umbandezelo. Ebusuku, ukugcina ukukhanya Dome xa kunokwenzeka. Isebenzisa kuphela isixa esincinci sombane yaye iza kwenza kube lula ukuba abahlanguli ukufumana kuwe.
Cima Pipe Exhaust: Qinisekisa umbhobho zeemoto ayikho ugcwale likhephu, umkhenkce, okanye udaka. Umbhobho exhaust ukuvimbile kunokubangela igesi carbon monoxide ezibulalayo ukuba avuze kungena umkhweli egumbini isithuthi xa injini iyasebenza.
Hlala Ukuncoma: Sebenzisa nantoni na ekhoyo ukuze unombombiya umzimba wakho ukusuka abandayo. Oku kungabandakanya amakhuko floor, amaphephandaba, okanye iimephu zamaphepha. Pre-pack zokulala nempahla enzima ukusebenzisa kwimeko yongxamiseko.
ukonga fuel: Ukuba kuyenzeka, ukubaleka kuphela injini heater elide ngokwaneleyo ukususa kwasebusuku. Oku kuya kunceda ukonga amafutha.
Car Travel? Ziba yonke siye sathi nje
Yintoni xa kukho indlela siphephe lonke kobuxhakaxhaka ngasentla lokuhlala ekhuselekileyo ngoxa uqhuba? Ukuba nje kukho indlela yothutho nezinokwenza ukuba uyatsiba ku-, kwaye yokuhamba ngokukhawuleza kwaye ukuhamba ngokukhuselekileyo. Oh ulinde, Nantsi lapho! Libizwa ngokuba uloliwe!
Yinyaniso ukuba iimoto zinika inkululeko abambalwa nabanye zindlela ethwala ukwenza. Uyakwazi ahambe ngenye ongafikelelekiyo iindlela zonxweme, intloko ukuze imizi ekude, kwaye Ungakhathazeki malunga kwiishedyuli okanye izihlalo ukuthengisa ngaphandle. Andiwaboni ngaphandle iintsilelo zabo, kunjalo. Bona izizathu ezininzi ngaphezu!
Oololiwe zikhuselekile yaye ngokukhawuleza! Ngoko ke akukho mfuneko yokuba uhlale ukhuselekile ngoxa uqhuba ukuba Qeqesha zokuhamba, Kwakhona oololiwe luyafikeleleka kakhulu, ingakumbi ukuba usebenzisa Gcina A Isitimela bokubi amatikiti etreyini yakho. Udinga yanelisayo? Sambala wonke hetalia kwi kutheni ukuqeqesha ukuhamba ngu superior ukuba ezindleleni ukuhamba.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsafe-driving-during-winter%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)